Amai Clinton Vanoti Zimbabwe Iri Kutemesa America Musoro
Amai Clinton vanoti Va Mugabe nevamwe vashoma mu Zanu-PF ndivo vari kudya mari yemangoda ekwa Marange pamwe nekuita huwori munyika.
Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica, Amai Hillary Clinton, vanoti hurumende yavo icharamba yakatarisa zviri kuitwa nemutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, nevamwe vavo mu Zanu-PF, nekuti ndivo vari kuomesera ruzhinji rwe Zimbabwe.
Vachitaura kumusangano wakaitwa neMuvhuro ku State Department muWashington DC, Amai Clinton vakati Va Mugabe nevamwe vashoma mu Zanu-PF ndivo vari kudya mari yemangoda ekwa Marange pamwe nekuita zvehuwori munyika. Vakati kunyange hazvo vazhinji vanga vachida kuti zvinhu zvikasike kuchinja mu Zimbabwe, zvinhu zvichakaoma munyika kuvanhuwo zvavo vari kuda kuti zvinhu zvichinje.
Amai Clinton vakati hurumende yavo icharamba ichipa rubatsiro kune vanhuwo zvavo. Va Joy Mabenge ndivo mukuru webazi re Democracy and Governance musangano re Institute for a Democratic Alternative for Zimbabwe. VaMabenge vanoti Amai Clinton vabaya dede nemukanwa nekuti zvinhu munyika hazvisati zvamira zvakanaka.